Fananan-tany :: Esorin’ny kaominina eny Anosimpatrana ny MBS • AoRaha
Fananan-tany Esorin’ny kaominina eny Anosimpatrana ny MBS
Mamerina ny fananany any amin’ireo nampiasana izany ny kaominina Antananarivo renivohitra. Voakasika ao anatin’izao hetsika izao ny tany eny Anosimpatrana, izay nampiasain’ny vondrona MBS efa ho taona maro izao.
« Manome enim-bolana hialanareo eo amin’ny tanin’ ny kaominina Antananarivo renivohitra izahay », hoy ny ampahany amin’ny taratasy fampahafantarana nosoniavin’Andriantsitohaina Naina, Ben’ny tanànan’Antananarivo renivohitra ary nalefa teny amin’ ny orinasan-tserasera MBS eny Anosimpatrana, omaly. Fifanaraham-panofana tany, tamin’ny 8 aogositra 2000, ity kasain’ny kaominina hofoanana ity.
Namaly avy hatrany an’izao fikasan’ny kaominina Antananarivo renivohitra izao ny Filoha teo aloha Ravalomanana Marc, tompon’ny orinasa MBS. « Miantso ny Ben’ny tanànan’Antananarivo mba handinika tsara ny fifanarahana teo amin’ ny MBS sy ny kaominina Antananarivo aloha aho, izay vao handray fepetra toy izao », hoy izy nanoloana ny mpanao gazety, omaly. Tsy maintsy hiala eny Anosimpatrana, noho izany, ity haino aman-jery ity aorian’ny enim-bolana, nanomboka tamin’ny 30 jolay lasa teo, fotoana nivoahan’ny taratasy fampahafantarana avy amin’ ny kaominina.
12/08/2020 à 14:45
Rariny raha esorin’ny Kaominin’Antananarivo eo @ Fananam-bahoaka ny MBS satria miova Andriana miova Sata hoy ny Ntaolo Malagasy ka tokony mahay manaiky fandaminana Atoa Marc RAVALOMANANA fa tsy handrefy foana ny Mpitondra toy izany satria raha nitondra teo izy dia tsisy nandrefy azy t@ fanamparam-pahefana nataony ny Malagasy
Fanampiana isan-tokatrano :: Hiverina ny fizaràna Vatsy Tsinjo eto Antananarivo